Tag: nloghachi na ntinye ego nke ahia | Martech Zone
Tag: ịlaghachi azụ ahịa ahịa
Satọdee, Nọvemba 16, 2019 Satọdee, Nọvemba 16, 2019 Douglas Karr
Anyị ekenyela infographics na ihe influencer ahịa bụ, mmalite nke ahịa influencer tupu, yana isiokwu dị iche iche banyere usoro kachasị mma ahịa ahịa, otu esi eji ndị na-eme ihe ike, yana ọdịiche dị n'etiti micro na mmetụta ndị ama ama. Ihe omuma ihe omuma a bu nkowa nke ahia influencer na uzo di ugbua na onu ogugu na uzo. Ndị folks na SmallBizGenius ejikọtara ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke na-enye ọnọdụ doro anya nke ịzụ ahịa ahịa taa, n'okpuru
Automdị ahịa akpaaka nke ahịa, ihe ịma aka, na ihe ịga nke ọma
Tọzdee, Ọktoba 3, 2013 Tọzdee, Ọktoba 3, 2013 Douglas Karr
Holger Schulze na Blog teknụzụ Marketing niile mere nyocha nke ndị na-ere ahịa B2B na B2B Technology Community Community na LinkedIn. Ajụrụ m Troy Burk, onye isi oche nke Right On Interactive - usoro nhazi akpaaka ahịa nke achọpụtapụtara dị ka onye ndu na ụlọ ọrụ - iji nye nzaghachi na nsonaazụ nyocha ahụ. Emechara nyocha ahụ nke ọma ma nye ụfọdụ ezigbo usoro maka etu otu ndị ahịa B2B si enyere onwe ha aka akpaaka. Kudos
Atụmanya na azụmaahịa gị
Anyị nwere nzukọ abụọ dị egwu ụnyaahụ, otu nwere onye ahịa na otu nwere atụmanya. Mkparịta ụka abụọ ahụ gbara gburugburu na-atụ anya na nloghachi na azụmaahịa azụmaahịa. Companylọ ọrụ mbụ ahụ bụ nnukwu ụlọ ahịa na-apụ apụ na nke abụọ bụ nnukwu nzukọ na-adabere na ahịa nchekwa data na nzaghachi ozi ziri ezi. Ulo oru abuo ahu ghotara, rue dollar, ka uzo ahia ha na ahia ahia si enyere ha aka. Nzukọ ahịa ahụ ghọtara nke ahụ, yana